eBay maka iOS na-enye anyị ohere i toomi barcode iji ree ngwaahịa | Akụkọ akụrụngwa
Ugbu a n'ahịa anyị nwere ọtụtụ nhọrọ dịnụ ma a bịa n'ire ihe niile fọdụrụnụ, na ike gwụrụ anyị ma ọ bụ na ọ kwụsịrị ịbara anyị uru. Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ ozugbo ngwa ndị na-ere ngwaahịa n’onwe ha na-enye anyị, ndị ọzọ na-aga “amaghị aha” nke ọrụ ndị ọzọ na-enye dị ka eBay.
eBay abụrụla ihe ikpo okwu kachasị mma na ntanetị ugbu a iji ree ihe niile fọdụrụnụ na anyị makwaara nke ahụ nwere obere mmepụta na gburugburu ebe obibi anyị. Na mgbakwunye, ọ bụ ikpo okwu kachasị mma iji zere ịnweta ndị ala ọzọ iji lelee ọnọdụ ahụ, ebe ọ bụ na ọ dabere na aha ndị ọrụ yana nzụta echekwara site na PayPal. N'echiche a, ngwa maka iOS ka natara ọrụ dị mkpa.
Ngwa maka iOS, n'ikpeazụ nyere anyị ohere iji ọrụ nke dị adị mana ọ bụ naanị maka ndị na-azụ ahịa, ọrụ nke nyere anyị ohere nyocha na igwefoto, ngwaọrụ mkpanaka, akara nke ngwaahịa anyị na-achọ, iji ịchọta ya n'ụzọ dị mfe karị. Ma ugbu a, anyị nwere ike jiri barcode scanning ịgbakwunye ngwaahịa na anyị chọrọ ire n'elu ikpo okwu n'ụzọ dị otu a, anyị nwere ike itinye nkọwa niile nke ngwaahịa anyị chọrọ ire n'ụzọ dị ọsọ karịa.
Ọrụ nke ọrụ ọhụrụ a dị mfe, ebe ọ bụ naanị na anyị ga-aga na ngalaba ebe anyị na-agbakwunye ngwaahịa ọhụrụ iji ree ma pịa igwefoto, ka o wee mepee ma chọọ akara ngosi anyị gosipụtara. Ozugbo ịchọtachara ya, niile ngwaahịa ubi ga-ejupụta na-akpaghị aka anyị ga-agbakwunye naanị ọnụahịa na usoro ịkwụ ụgwọ, yana nkọwa dị mkpirikpi.
eBay: ejiji, ngwá electronic na ụlọfree
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » eBay maka iOS na-enye anyị ohere i toomi barcode iji ree ngwaahịa
Enwere ike iji Samsung's AR Emoji n'oge oku vidiyo na ọdịnihu